Alcatel 3088 4G: Famaritana, vidiny ary fanombohana | Androidsis
Eder Ferreno | | Finday, Fitaovana hafa
KaiOS no rafitra fiasan'ny telefaona tsotra, izay mahazo akany eo amin'ny tsena, amin'ny tranga maro a hafa amin'ny Android Go ho an'ny mpampiasa maro. Ary koa, tato ho ato afaka mampiasa WhatsApp izy ireo amin'ny maodely marobe amin'ity faritra ity. Misy telefaona vaovao tonga amin'ny rafitra fandidiana, ny Alcatel 3088 4G, telefaona vaovao avy amin'ny mpanamboatra fanta-daza.
Izy io dia aseho amin'ny telefaona tsotra, araka ny azonao an-tsaina, na dia iray amin'ireo feno indrindra amin'ity faritra ity aza izy io. Hatramin'ity Alcatel 3088 4G ity dia hitantsika WhatsApp, Google Maps, Facebook, Google ary fampiharana hafa. Ka manome safidy bebe kokoa ho an'ireo mpampiasa amin'ity tranga ity. Inona no azontsika antenaina amin'ity finday ity? Lazainay anao eto ambany ny zava-drehetra.
Amin'ny endriny dia hitantsika fa tsy dia misy tsy ampoizina firy, miaraka amina endrika mitovy amin'ilay hitantsika tamin'ny maodely hafa amin'ity sehatry ny tsena ity. Habe mihena, miaraka amin'ny kitendry ara-batana sy efijery somary kely amin'ity tranga ity, dia mahagaga ihany koa ny fananana fakantsary, izay tsy zavatra hitantsika amin'ireo karazana telefaona ireo foana. Tsotra, fa mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpampiasa amin'ity karazana telefaona ity.
Nokia 105 sy Nokia 220 4G: finday vaovao vaovao an'ny marika
1 Famaritana Alcatel 3088 4G
Famaritana Alcatel 3088 4G
Ny Alcatel 3088 4G dia telefaona tsotra, mora vidy ary azo antoka, tonga lafatra ho an'ireo mpampiasa izay tsy mila finday avo lenta, fa te hanana asa mitovy amin'izany. Noho izany, ny fisian'ny fampiharana toa ny WhatsApp na Google Maps dia mahatonga azy io ho safidy mahaliana ho an'ny mpampiasa sasany. Tsy misy fisandohana be loatra, fa ho tanteraka tsara. Ireto avy ireo antsipirihany feno:
Screen: haben'ny QVGA 2,4 mirefy
Fitehirizana anatiny: 4 GB (azo ovaina miaraka amin'ny microSD hatramin'ny 32 GB)
Fakan-tsary aoriana: 2 MP mifampiditra amin'ny 3,2 MP misy flash
Batterie: 1.500 mAh
Rafitra miasa: KaiOS 2.5
Fifandraisana: 4G LTE, Wi-Fi b / g / n, Bluetooth 4.1, GPS, radio FM ary minijack
Refy: 125,2 x 50,5 x 12,75 mm
Milanja: 90 grama
Ny marika dia nanome antoka fa ity telefaona ity aseho ho iray amin'ireo safidy feno indrindra amin'ity ampahan'ny tsena ity. Satria avelany amina rindranasa toa anay izahay, fandefasan-kafatra, fanaovana kajy, fanovana vola, kalandrie, mailaka na radio ao anatiny. Ka ho afaka hanao bebe kokoa noho ny miantso sy mandefa hafatra miaraka amin'ity Alcatel 3088 4G ity isika.
Etsy ankilany, ny fangatahana kintana dia avy amin'ity tanan'i Google sy Facebook ity. KaiOS dia nanao fifanarahana tamin'izy roa ireo ka maro amin'ireo fiasa ao aminy no misy amin'ireo finday ireo. Ity no tranga misy ao amin'ity Alcatel 3088 4G ity, izay mamela antsika fampiharana toa ny Mpanampy Google, Fikarohana Google, Google Maps, YouTube ary WhatsApp. Ka ny mpampiasa dia hanana fahafaha-mampiasa bebe kokoa amin'ny alàlan'ity finday ity, noho ny fahazoana miditra amin'ireo rindranasa ireo. Ka raha safidy mahaliana raha te hampiasa ny iray amin'ireo rindranasa ireo amin'ny fitaovana ianao.
Momba ny fandefasana an'ity telefaona ity dia misy fisalasalana maro amin'izao fotoana izao. Tsy nilaza na inona na inona momba ny vidiny ny orinasa ity finday ity dia hanana, azo antoka fa tena azo idirana ary ambanin'ny 80 euro (mifototra amin'ny maodely hafa amin'ity sehatry ny tsena ity). Na dia tsy mbola misy data momba an'io na momba ny daty ofisialy ofisialiny. Tsy nisy antsipiriany nomena momba an'io. Fanontaniana iray hafa ny hoe hanomboka na tsia ny fitaovana eny an-tsena toa an'i Espana. Amidy any Espana i Alcatel, saingy tsy hainay raha modely tsotra toa izao no halefa eto amintsika. Andao hiandry ny fanamafisana avy amin'ny mpanamboatra azy manokana.
Ny fantatsika dia ity Alcatel 3088 4G ity dia havoaka amin'ny loko roa, Blue (Metallic Blue) sy volondavenona (Gray Metallic). Navoaka tamina kinova RAM sy fitehirizana tokana izy io, ka tsy dia misy fahasarotana firy amin'ity fitaovana ity. Noho izany, hanongilan-tsofina amin'ny vaovao vaovao momba ny fahatongavan'ity telefaona tsotra eny an-tsena ity isika. Ahoana ny hevitrao momba ity modely ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Alcatel 3088 4G: telefaona vaovao miaraka amin'i KaiOS
anais dia hoy izy:
Ny zavatra tena mahaliana amin'ity maodely ity dia ny fananana fampiharana mahazatra an'ny smartphone (toy ny watsap na google) fa amin'ny telefaona tsotra kokoa.
Heveriko fa safidy mety indrindra ho an'ny olon-dehibe, izay mitady ny fahatsorana sy ny fanamorana ny fampiasana izany miaraka amin'izay no te-hifandray tsara amin'ny fotoana rehetra.
Valiny tamin'i Anais
Huawei handefa ny findainy voalohany tsy misy Android amin'ity taona ity